के के हुँदै छ प्रथम यूरोप स्तरिय महिला भेलामा ? :: NepalPlus
के के हुँदै छ प्रथम यूरोप स्तरिय महिला भेलामा ?
बिदेशमा बस्ने नेपाली महिलाहरुका समस्या, गुनासा, अप्ठेरा र अवस्था भन्नासाथ हम्रो मानसपटलमा झट्ट याद आउँछ खाडीमा काम गर्ने नेपाली महिलाहरुको । तिनका कठिनाईका बारेमा चर्चा हुन्छ । तिनैका कथा र ब्यथाले स्थान पाउँछन । तर सुन्नु भएको छ कहिल्यै यूरोपमा बस्ने महिलाका पनि कठिनाई के छन, गाह्रो साह्रो के छ, ति कसरि बस्छन भनेर ? यूरोप सबैका लागि स्वर्ग छैन । यहाँ पनि दुख छ । बेदना छन । छट्पटी र उकुसमुकुस छन । सुख खोज्दै आउँदा दुखको खाडलमा पर्नेपनि निकै छन । तर तिनको कहि कतै चर्चा हुन्न ।
त्यसैले यूरोपमा बस्ने नेपाली महिलाहरुको अवस्था के छ ? तिनका दुख र सुख, बेथा र बेदना, छ्ट्पटी र हुटहुटीका सम्पूर्ण नाली बेली थाह पाउन यस पटक यूरोपका नेपाली महिलाहरु पेरिसमा भेला हुँदै छन मार्च ८ का दिन । यस दिनलाई उनीहरुले दुई खण्डमा बिभाजित गरेका छन । पहिलो खण्डमा आगामी गणतान्त्रिक नेपालको संबिधानमा नेपाली महिलाहरुको हक र अधिकारलाई कसरि सुनिश्चित गर्ने ? यहि विषयमा ब्यापक छलफल गर्दै छन । भेलाले पारिद गरेका बुँदाहरुलाई संबिधानमा सुनिश्चित गर्न उनीहरुले नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गर्ने छन ।
कार्यक्रमको दोस्रो अवधिमा यूरोप भरिका महिलाहरुका समस्या, अवस्था र तिनलाई कसरि समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल तथा कार्यपत्रहरु प्रस्तुत हुने छन । यो कार्यक्रममा भाग लिन यूरोपका २६ वटै देशमा निमन्त्रणा पठाइसकेको छ एनआरएन फ्रान्सले । तिमध्ये थुप्रै देशबाट सहभागिहरु आउने निधो भैसकेको छ । सहभागि हुन नसकेका मुलुकलेपनि कम्तिमा संबन्धित देशका नेपाली महिलाबारे कार्यपत्र पठाउने भएका छन । त्यसैले यो कार्यक्रम आफैंमा चाखलाग्दो र ऐतिहासिक हुने पक्का छ ।
यूरोपमा नेपाली महिलाहरुका बारेमा हुन लागेको यस्तो खालको यो पहिलो कार्यक्रम हो । महिलाका वा पुरुष जसका भएपनि पहिले त नेपालीका समस्या हुन । समस्या महिलाका भएपनि ति स्वत: पुरुषसँग र ति पुरुषका भएपनि स्वत: महिलासँग गासिएका हुन्छन । त्यसैले यो महिलाको कार्यक्रम भनिएतापनि यसमा पुरुषहरुकापनि समस्या, अप्ठेरा र सुख दुख स्वत: गाँसिएर आउँछन । त्यसैले, तपाईहरु जुन देशमा भएपनि यसमा सहभागि हुन एनआरएन फ्रान्सले आग्रह गरेको छ । महिलाहरुलाई यस कार्यक्रममा सहभागि हुन अझ धेरै प्रेरित गर्नुहोस । अरुका कुरा सुन्ने, सुनाउने गर्दा धेरै कुरा सिकिन्छ, जानिन्छ र मानिसलाई जागरुक तथा चनाखो बनाउँछ । ज्ञानको भण्डार फराकिलो बन्छ ।
यूरोप भरिका महिलाले गर्नेभए फ्रान्समा जमघट